Adora & etc.: All time Favorites - Mascara (တဂ်ပို့စ်)
Posted by Adora etc. at 06:41
Mrs. Bagel 29 October 2014 at 21:09
မနေ့က ကော်မန့် ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိဘူး။
Mrs. Bagel 29 October 2014 at 21:11
အိမ်မှာ maybelline အဝါရောင်ရှိတယ်။ ကုန်ရင် Adora ပြောတဲ့ထဲက တစ်ခုခုပြောင်းသုံးမလားလို့။ Instamag ပုံရဲ့ အပေါ်ဆုံး ပုံက ဘာနဲ့ဆိုးထားတာလဲ။ ထူထူကော့ကော့လေး။ :)
စုချစ် 30 October 2014 at 01:26
မက်စ်ကာရာကို ခုထိ မသုံးတတ်တော့ လက်ဆောင်ရတာနဲ့ သူများကို လက်ဆောင်တဆင့်ပြန်ပေးမိတော့တာပဲ... :)
Adora etc. 30 October 2014 at 02:08
မြတ်ကြည် - အားလုံးက Black Noir G နဲ့ဆိုးတာ။ ထောင့်အမျိုးမျိုးကရိုက်ထားလို့။
အမစုချစ် - နောက်တခေါက်လက်ဆောင်ရရင် ဒီဘက်ကိုပြစ်လိုက်ပါ။ ဟီးဟီး စတာ။ ဆိုးကြည့်ပါ အမရဲ့။ လွယ်လွယ်လေး။
Mrs. Bagel 31 October 2014 at 20:14